Kwatinga Tarisa Kwako B2B Kushambadzira | Martech Zone
Kwatinofanira Kutarisa Yako B2B Kushambadzira
Muvhuro, Nyamavhuvhu 29, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Jenn Lisak Golding
Econsultancy vachangoburitsa yavo Nyamavhuvhu 2011 mushumo weB2B Internet Statistics, ichitsanangura zvitsva zvakawanikwa pakushambadzira kwepamhepo, e-commerce, Indaneti, uye zvine hukama nedhijitari. Nepo chirevo ichi chichipa zvakawanda zvakawanikwa, heano mamwe manhamba anonakidza akanyatso kumira pachena:
Maindasitiri zviitiko uye tradeshows zvinoramba zvakaomarara yevatengesi veB2B. Muna 2010, 85% yevatengesi vakaisa mari mukushambadzira kwezviitiko, uye 28% yeboka iro rinoronga kuwedzera mari idzodzo muna 2011. Dai vakapihwa mari inowedzera, ma tradeshows ndiyo nhanho nhamba yekutanga iyo vatengesi vaizodyara.
Digital Media iri gumi ematanhatu epamusoro gumi anoshanda anoshanda ekusvika kune vateereri veB8B.
63% yevatengesi veB2B vanoziva izvozvo zvirongwa zvechinyakare zvine simba rakasimba pane zviitiko zvepamhepo maererano nekutsvaga kwekutsvaga, traffic yewebhu, uye shanduko dzepamhepo.
Paavhareji, vatengesi vanoshandisa 38% yemabhajeti avo akazara pakuziva mhando, 34% pane inotungamira chizvarwa, uye 28% pakachengetwa kwevatengi. Kupesana, 28% yemabhajeti epamhepo dzakakumikidzwa kuzivisa nemusiyano wakapihwa pakati pechizvarwa chekutungamira uye nekuchengetedza kwevatengi.
Vanopfuura hafu (55%) yemasangano eB2B akaongororwa pari zvino ane dhipatimendi rine chinonyanya kukoshesa kuchengetedzwa kwevatengi uye kuvimbika. 94% yemakambani aya anoshuma kuti kwaive nevakuru vepamusoro rutsigiro rwekugadzira iro dhipatimendi. Vanopfuura chikamu chimwe muzvitatu (36%) chevakabvunzwa vakaratidza kuti dhipatimendi ravo rinomhan'ara rakananga kuna CEO; 21% mushumo kuna Sr. VP / VP weKushambadzira uye 15% mushumo kuna Sr. VP / VP Wekutengesa
Kana iwe uchinyanya kubata nevatengi veB2B, ndinokurudzira zvikuru kuti utore nguva yekugara pasi uye uverenge chirevo ichi, icho chinotarisana nezvose zvinoenderana neindaneti kushambadzira indasitiri.